Muuri News Network » Wararkii ugu dambeeyay duqeymaha Ruushka ee Suuriya +Sawirro
Wararkii ugu dambeeyay duqeymaha Ruushka ee Suuriya +Sawirro
Oct 1, 2015 - Comments off
Ruushka ayaa markii u horeysay bilaabay weeraro cirka ah oo ka dhan ah Mucaaradka ka soo horjeeda Madaxweyne Bashar Al-Assad, iyadoo durba uu soo baxayo khasaarihii ka dhashay duqeymaha iyo bur burka dhismayaal.
Duqeymaha ayaa lala eegtay goobo ay maamulayeen Kooxaha mucaaradka, gaar ahaan Gobolada Homs iyo Hama
Mareykanka aya sheegay in lagu soo wargeliyay duqeymaha saacad ka hor inta aysan duqeymaha dhicin.
Saraakiil ka tirsan wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa sheegay in ilaa 20 howl gal ay fuliyeen, isla markaana bartilmaameedsaday dowladda islaamiga ama IS, isla markaana ay bur buriyeen goobo u yaalay hub, shidaal iyo saanado kale, waxaana intaa ku dareen in aysan jirin dad rayid ah oo la bartilmaameedsaday.
Laakiin Saraakiil ka tirsan Mareykanka ayaa sheegay in aysan muuqan illaa iyo hada goobaha ay maamulaan dowladda Islaamiga ama IS oo la beegsaday
Kooxaha Mucaaradka ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Suuriya ay duqeeyeen magaalooyinka Zafaraneh, Rastan iyo Talbiseh, waxaana ku dhintay duqeymahaas 34ruux oo badankood ay caruur yihiin.
Mucaaradka ayaa sheegay in goobaha la duqeeyay aysan ku jirin dhulka ay maamulaan IS, waxaana kooxaha mucaaradka hubka siiyay Mareykanka oo u arka inay yihiin kuwo qunyar socod ah.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka oo ka hadlayay Golaha Ammaanka ayaa sheegay inay mudan tahay in la soo dhoweeyay tallaabada Milateri ee Ruushka, balse ay marka hore tahay inuu qaado weeraro ka dhanka ah IS iyo Kooxaha ku xiran Al-Qaacida
Goor sii horeysay Baarlamaanka Ruushka ayaa u codeeyay in weeraro milateri ah oo laga fuliyo gudaha Suuriya, kaasoo lagu taageerayo Madaxweyne Bashar Al-Assad.
Dagaalada sokeeye ee Suuriya ayaa muddo afar sano socda, iyadoo kooxaha hubeysan ay u dagaalamayaan sidii ay xukunka ugu tuurayaan Madaxweyne Asad.